भरतपुर महानगरको पहलमा चितवनमा पनि कोरोना ल्याव धमाधम सेटिङ हुँदै | MeroKhabarSathi
मानव-जनावर द्वन्द्वमा मानिसले देखाएको क्रुरताको पराकाष्ठा
गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सांसद रावलकाे सरकारलाई आग्रह
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको आज देखि साताव्यापी आन्दोलन सुरु
समाचारकाे प्रभावले पत्रकारलाई दिएकाे खुसि
लकडाउनमा रमाएका पशुपंक्षि
भरतपुर महानगरको पहलमा…
चितवनको भरतपुरमा रहेको राष्ट्रिय पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पनि कोरोना परिक्षणका लागि ल्याव स्थापना हुने भएको छ। भरतपुर महानगरको विशेष पहलमा २४ घण्टा भित्र कोभिड १९ को नमुना परिक्षण प्रयोगशाला (पिसिआर ल्याब) संञ्चालनमा आउने गरि काम सुरु गरिएको हो। शनिवार बिहानबाट परिक्षण थाल्ने गरि काम अघि वढाईएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राबिधिक टोलि बुधबार चितवन आएर बिहिबार दिनभर स्थानको छनोटमा खटिएको थियो । प्राविधिक टोलीसंगै प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदी,भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाल र भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी पनि दिनभर ल्याव स्थापना गर्ने स्थानको खोजीमा लागेका थिए ।
सो प्रयोगशाला, कृषि तथा वन बिज्ञान विश्व बिद्यालय रामपुरको दुईवटा प्रयोगशाला र बिपि कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको प्रयोगशालाको निरिक्षण पश्चात टोलिले राष्ट्रिय पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालानै उपयुक्त भएको जनाएको थियो । यस संगै कृषि तथा पशु पंक्षी बिकास मन्त्रालय संग अनुमति लिएर आज बिहानबाट काम थालिएको भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको टोलिका प्रमुख नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्टार पुष्पराज खनालका अनुसार आजैबाट काम थालिएको छ । पिसिआर ल्याब रामपुरबाट ल्याईदै छ । बायोसेफ्टि क्याबिनेट एउटा यही छ भने अर्को मन्त्रालयबाट झिकाईएको छ । बिज्ञ दुई जना जिल्लामानै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिपि कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका डा. मदन पाण्डे र चितवन मेडीकल कलेजका डा. व्रजेस झाको नेतृत्वमा प्रयोगशाला संञ्चालनमा ल्याईने छ । उहाँहरुलाई आबश्यक पर्ने अन्य जनशक्ति यहि उपलव्ध हुने बताईएको छ । मन्त्रालयले किट, रिएजेन्ट, आबश्यक रसायन सहितका अन्य सामानहरु आजै पठाउने खनालले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको पहलमा भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा हुने गरि प्रयोगशाला संञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले अस्थाई अस्पताल समेत स्थापना भई सकेपछि परिक्षण समेत यही गर्न गरिएको गृहकार्य अनुरुप काम भईरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिलेको संक्रमण कालमा यहाँ ल्याब स्थापना गरिएको भए पनि दिर्घकालिन रुपमा संञ्चालनका लागि केही महिनामानै भरतपुर अस्पताल परिषरमा स्थानान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाकै पहलमा भरतपुर कोरोना बिषेश (अस्थाई) अस्पताल संञ्चालनमा रहेको छ । सो अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र नीजि मेडीकल कलेजहरुबाट दिनहुँ जसो कोरोनाको आशंकामा बिरामीको नमुना केन्द्रिय प्रयोगशालामा पठाईदै आएको छ । दैनिक गाडीको प्रयोग गरेर पठाउनु पर्ने र नतिजा आउन ढिला हुँदा समस्या हुँदै आए पछि प्रयोगशाला यही स्थापना गर्न लागिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
रजिष्ट्रार खनालका अनुसार भरतपुर संगै प्रयोगशालाको संख्या ११ पुगेको छ । सात प्रदेशमा १÷१ वटा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, बिर अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना भई काम भईरहेको छ ।